warkii.com » Turkiga oo cuna qabateyn la saari dooni iyo sababta ka dambeyso
Turkiga oo cuna qabateyn la saari dooni iyo sababta ka dambeyso
Wasiirka arrimaha dibada ee Griiga Nikos Dundas ayaa carabka ku adkeeyay in Athens ay weydiisan doonto midawga yurub in ay daraasad ku sameyso suurtagalnimada tilaabooyin adag looga qaadayo Turkey, si looga jawaabo xadgudubyada ay Turkiga kula kaceen Griiga.
Wareysi uu siiyay kanaalka Giriiga laga leeyahay ee Skai, ka hor kulanka ugu horreeya ee wasiirada arrimaha dibedda midowga yurub tan iyo bilawgii cudurka Corona kaasoo lagu qaban doonaa Isniinta magaalada Brussels, ayuu Dundias wuxuu sheegay in Giriiga ay weydiisan doonto midowga inay u diyaariso liiska talaabooyinka ugu adag ee laga qaadi karo Turkey hadii ay ku xad gudubto xuriyada madax banaanida ee Griiga. Tan ayaana waxay tixraac u tahay qodista Turkida ee bariga Badda Mediterraneanka.
Wasiirka ayaa sidoo kale ku baaqay in Yurub ay si deg deg ah u qaaddo mowqifkeeda ku habboon si looga hortago wax kasta oo ku xadgudba xuquuqda madaxbanaanida Griiga, isagoo intaas raaciyay: “Haddii (Yurub) aysan ka hor istaagin inay tan dhacdo, ma jeclaan doonto waxa imaan doona waxaana horay ugu xaqiijinay Turkiga inaanan falalkooda gacmaha ka laaban doonin, waa siduu hadalka u dhigaye.
Ugu dambeyn Wasiirka ayaa weerar culus ku qaaday Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan isagoo leh: “Erdogan xadkiisii wuu kasoo talaabay asigoona iska indho tiraayo sharciyada dowliga iyo xeerarka u dagsan anagana waa inaan arintaas iska indho tirin”.